Fampisehoana an’Habakabaka Tao Amin’ny Repoblika Dominikana Niafara Tamin’ny Voina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2013 10:09 GMT
Nandritra ny andro faharoa sady farany tamin'ny Fampisehoana an'Habakabaka Karaibana, minitra vitsy monja nanombohany, dia nisy voromby Pillán T-35, manana ny laharana FAD 1807, vita avy any Chile ary an'ny Tafika an'Habakabaka Dominikana (FAD), nentin'ny mpanamory lietnà Rafael Eduardo Sánchez Astacio sy ny mpanamory lietnà bokotra iray Carlos Manuel Guerrero Guerrero, nanana olana nandritra ny tsingeringerina ary nianjera tany an-dranomasina.
Nitranga tamin'ny alahady 7 avrily ny loza ary natrehi-mason'ny Dominikana an'arivony izay nifamory teny an-dalamben'i Santo Domingo hankafy ny sangodina sy ny fahaizan'ny mpanamory teratany sy vahiny, mandoko ny lanitry ny renivohitra Dominikana. Tsy ampy adiny roa taorian'ny voina dia hita ny vatana mangatsiaka roa ary nentina tany amin'ny Tobin-tafika an-dranomasina Dominikana ao Sans Soucí ary avy tany no nafindra tamin'ny alalan'ny voromby ho any amin'ny Hopitaly Miaramila Dokotera Ramón de Lara, FAD.
Araka ny nolazain'ny mpikarakara dia mifanaraka tsara amin'ny fenitra iraisampirenena momba ny fampisehoana an'habakabaka napetraky ny Filankevitra Iraisampirenena misahana Fampisehoana an'habakabaka ny Fampisehoana an'Habakabaka Karaiba 2013, izay mpanohana ny hetsika rahateo.
Naneho avy hatrany ny fiaraha-miory ny Filoha Danilo Medina:
@DaniloMedina: Malahelo tokoa amin'ny fisian'ny loza rahaka izao isika. Andao hiara-mivavaka ho fianakaviana sy ny naman'i Carlos sy i Rafael. Fiadanana anie ho an'ny fanahiny.
Na izany aza, tsy ela dia naneho ny tsy fahafaliany ny fiarahamonim-pirenena. Raúl Raful, zanaky ny solontenan'ny PARLACEN (Parlamento Centroamericano-Central American Parliament) [es], Tony Raful, namoaka izao tao amin'ny kaonty Twitter-ny:
@RaulRaful: Atambo koa izany ekipa mpamonjy voina izany. Mpitsoraka roa tsy manana tahirin-drivotra no nirotsaka hitady ny vatana mangatsiaka amin'ny alalan'ireo lakana avy any Boca Chica?#ShowAereo
Mampitovy lokanga amin'izany ny mpisolovava Bartolomé Pujals:
@BartolomePujals: Mampazava zavatra vitsy izao voina mampalahelo izao. 1) tsy fahaizan'ireo manampahefana amin'ny famonjena voina; 2) ny fahalaindainan'ny mpikarakara. #OJO
Manamafy ny mpanao gazety sy ny mpiserasera sasantsasany fa tsy mety amin'ny fanaovana tsingeringerina an-habakabaka ilay voromby ka novalian'ny mpampita hevitra sady politisiana José Laluz :
@laluzjose: #ShowAereo Ny litera B amin'ny laharan'ny Pillan dia manamarika fa andiany faharoa iny ary ny taratasy ara-teknika indray dia MANONDRO fa mety hanaovana tsingeringerina io.
Amin'izao fotoana izao, araka ny fanambarana natao tamin'i Listín Diario [es], Ny Jeneraly Hugo González Borrel, izay efa komandin'ny Tafika an'Habakabaka Dominikana tamin'ny fotoana nahazoan'i Repoblika Dominikana ny voromby Pillán, no niteny fa mety ho nisy ny hadisoan'olombelona tamin'ny nianjeran'ny voromby, izay nahafatesan'olona roa. Mifanaraka amin'izany, navoitran'ny Tafika an'habakabaka Dominikana fa eo ampanaovana famotorana hahalalana bebe kokoa izay tena nitranga.
Indreto eto ambany ny sarin'ny voina, nalaina nahazoana alalana avy amin'ny vohikalam-baovao Diario Libre [es].